» हार्दिक बधाई: साफ च्याम्पियनसिप फुटबल- नेपालले २२ वर्षपछि माल्दिभ्सलाई उसकै भूमिमा सानदार साथले हरायो! हार्दिक बधाई: साफ च्याम्पियनसिप फुटबल- नेपालले २२ वर्षपछि माल्दिभ्सलाई उसकै भूमिमा सानदार साथले हरायो! – हाम्रो खबर
काठमाडौं।दक्षिण एसि¥या महादेशको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिप फुटबल–२०२१ मा नेपालले ऐतिहासिक जित निकालेको छ । साफ च्याम्पियनसिपको १३औं संस्करणमा प्रतियोगिता आयोजक देश माल्दिभ्सलाई हराउँदै पाहुना टोली नेपालले विज¥यी सुरुआत गरेको हो । आज शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले घरेलु टोली माल्दिभ्सलाई उसकै भूमिमा ०–१ ले स्तब्ध बनाएर सुखद् सुरुआत गरेको छ ।
यससँगै नेपालले माल्दिभ्सलाई २२ वर्षपछि पहिलोपटक उसकै भूमिमा हराएको छ । साथै, साफ च्याम्पि¥यनसिप फुटबलको इतिहासमा भने नेपालले पहिलोपटक माल्दिभ्सलाई हराउन सफल भएको छ । यसअघि साफमा कहिल्यै पनि नेपालले यस प्रतियोगितामा माल्दिभ्सलाई हराउन सकेको थिएन । तर, यसपटक प्रतियोगिता आयोजक देशलाई उसकै भूमिमा स्तब्ध बनाएर नेपालले नयाँ इतिहास रचेको छ । यता, नेपालले माल्दिभ्सलाई उसकै भूमिमा हराएको यो २२ वर्षपछि हो ।
माल्दिभ्सको राजधानी मालेस्थित राष्ट्रिय रंगशालामा नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजे¥बाट सुरु भएको खेलमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो । खेलमा बल पोजिसनमा घरेलु टोली माल्दिभ्सले ज्यादा पकड जमाए पनि मुभ र गोलका अवसर दुवै देशले उत्तिकै बनाए । तर, तुलनात्मक रूपमा नेपालले ज्यादा विपक्षीको पोस्टमा अन टार्गेट प्रहार गर्नेक्रममा निर्धारित ९० मिनेटको समय सकिन ४ मिनेट बाँकी छँदा नेपालले गोल ठोक्न सफल भयो ।
सब्सिच्यूट युवा खेलाडी मनिष डाँगीले खेलको ८६औं मिनेटमा गरेको १ मात्रै गोल नेपाललाई जिताउन पर्याप्त बन्यो । मनिष खेलको ६९औं मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठको स्थानमा मैदान छिरेका थिए । मैदान छिरेको १७ मि¥नेटमै मनिषले गोल गरेर देशलाई पहिलो खेलमा जिताए । विशाल राईले मैदानको मध्य भागबाट बल कटाएर दिएको पास नियन्त्रणमा लिएर मनिषले माल्दिभ्सका ४ जना खेलाडीलाई छलाए अनि बक्स भित्र पुगेपछि गोलकिपरलाई समेत वान भर्सेस वानमा बिट गरेर प्रहार गरेको लो सटले सोझै जाली चुम्यो ।
त्यसपछि बाँकी समयमा माल्दिभ्स खेलमा फर्किन सकेन । र, खेल नेपालले ०–१ ले जित्यो । कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले आजको पहिलो खेलमा ४–३–३ को फर्मेसनमा टोली उतारेका थिए । नेपाली टोलीले माल्दिभ्सविरुद्ध अनुशासित डिफेन्सिभ खेल प्रदर्शन गर्दा घरेलु टोलीका कुनै पनि खेलाडीले नेपाली डिफेन्स लाइन छि¥चोल्न सकेनन् । नेपाली टोलीका कप्तान समेत रहेका किरण चेम्जोङले ३ पटक उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए ।
साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले माल्दिभ्सलाई पहिलोपटक पराजित गरेको हो । यसअघि साफमा नेपाल र माल्दिभ्स कूल ७ पटक खेल्दा ५ खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो भने २ खेल बराबरी भएको थियो । तर, यसपटक नेपालले साफमा माल्दिभ्सविरुद्ध जितको खडेरी अन्त्य गर्न सफल भयो । अब यो जितपछि नेपाल र बंगलादेश समान ३ अंकका साथ पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । भारतले आ¥फ्नो खेल खेल्नै बाँकी छ ।
आजको पहिलो खेलमा माल्दिभ्सले नेपालविरुद्ध कूल ६२ प्रतिशत बल आफ्नो पकडमा राख्दा उसले ४१० सफल पास खेल्यो भने १४ पटक सट हान्यो । यीमध्ये मात्रै ४ सट अन टार्गेट थिए । यता, नेपालले कूल ३८ प्रतिशत मात्रै बल पाउँदा २५१ पास खेल्दै १२ पटक सट हान्यो । नेपालका १२ सटमध्ये ६ सट अन टार्गेट थिए । यो माल्दिभ्सको भन्दा बढी थियो । नेपालले अब दोस्रो खेल श्रीलंकासँग खेल्नेछ ।-फुटबल खबर